Global Voices teny Malagasy » Toa Hiavaka ny Fifidianana Filoham-pirenena 2017 ao Frantsa, Inty no Antony: · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Marsa 2017 4:53 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Sarintany manondro ny kandidà tafakatra teo amin'ny lohany tamin'ny fihodinana voalohan'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay tamin'ny 2012, tany amin'ireto faritra manaraka ireto: departemantan-drenivohitra, departemanta sy ireo tany ampitan-dranomasina, ary vahiny (Frantsay ivelan'i Frantsa). François Hollande –> mavokely, Marine Le Pen –> lokon-davenina, Nicolas Sarkozy –> manga avy amin'ny BigonL tao amin'ny Wikipedia CC-BY-30
Hitranga ny Alahady 23 Aprily sy 7 May ny fifidianana filohampirenena frantsay amin'ny 2017. Arahina fifidianana solombavambahoaka izy ny 11 sy 18 Jona. Noho ny antony maro samihafa, toa ho samihafa amin'ny teo aloha ireo fifidianana mananontanona. Ny antony voalohany dia hoe voalohany teo ambanin'ny Repoblika faha-V, nisafidy ny tsy hilatsaka ho kandidà ny filoha amperinasa François Hollande amin'ny fahataperan'ny fotoana fiasàny. Fa ny antony hafa, nasionaly sy iraisam-pirenena, dia manome fofona fisalasalàna an'ity fampielezankevitra ity.
Ao anaty fotoan-tsarotra ireo antoko mahazatra
Tamin'ny 2012, efa nitana ireo toerana voalohany isaky ny departemanta ireo antoko mahazatra izay ny Antoko Sosialista sy ny antoko Ireo Repoblikana tamin'ny fihodinana voalohany. Tena tsy ho toy izany intsony ny amin'ity taona ity: lasa faha-3 sy faha-4 ireo kandidà tao anatin'ny fitsapankevitra, lavitra be any aorian'i Marine Le Pen, kandidà avy amin'ny Mandatehezana Nasionaly (FN) ary Emmanuel Macron, kandidàn'ny hetsika Am-pandehanana (En Marche).
François Fillon, kandidàn'ny Repoblikana, dia voafatotra ao anatina olana ara-pitsarana tamin'ilay tantara ratsy momba ny asa sandoky ny vadiny Penelope. Benoit Hamon, kandidàn'ny Antoko Sosialista, dia mitsingevana amin'ny 16%-n'ny vato tao anatin'ny fitsapankevitra, taorian'ny nandreseny tamin'ny ambaratonga voalohan'ny havia.
Manamarina ny fihantsiana manoloana ireo rafitra politika mahazatra sy faniriana fiovana mafy ity fironana ity. Tomponandraikitra amin'ny fanadihadiana ao amin'ny departemantan'ny hevitra sy ny tetikadin'orinasa ao amin'ny Ifop i Jean-Philippe Dubrulle. Manazava ny antony mampiavaka ity fifidianana ity izy :
Ankehitriny, fironana roa mifanohitra no hitantsika: Amin'ny lafiny iray fihenan'ny fandraisana anjara (na farafahakeliny, tsy fahalianana) ary amin'ny lafiny iray hafa harena lehibe kokoa an'ny tolotra politika. Ny fahitan'ny vahoaka fa tsy nisy nahasolo tena ny heviny ny iray tamin'izy ireo no manamarina izany tsy fahalianana izany. Izany, no kandidà lehiben'ny havia ary kandidà lehiben'ny havanana, ary dia izay ihany. Ankehitriny maro karazana kokoa ilay tolotra miaraka amina tsipika tena miavaka tsara any amin'ny havia, toy ny any amin'ny havanana, izay mahatonga antsika miafara aminà tendro roa tena mahery. Na dia efa manana hevitra tsara momba ireo kandidà hifaninana aza ny frantsay, tsy mbola marim-pototra ilay tolotra. Mbola mety hitranga daholo ny zava-drehetra. Miatrika mazava tsara ny fandàvan'ireo kandidà teo aloha isika. Hiafara aminà fisafoakana fihetsiketsehana ve izany na fihenana? Mbola aloha loatra raha izao no hitenena an'izany.
Ny fiakarana tsy hay tohain'ny fambaboana fom-bahoaka ao anatin'ny demokrasia tandrefana
Ny fandresen'i Trump tany Etazonia, ny Brexit tany Grande-Bretagne, ny avy amin'ny farany havanana tany Hongria ary fiakarana ankapoben'ireo antoko mpambabo ny fon'ny vahoaka ao Eoropa , no fambara tena mivandravandra ny fandàvana ny fanatontoloana sy ny finiavana hiforitra anaty any amin'ny firenena maro. Mamelabelatra ny antony ikambanan ‘ireo fironana ireo any amin'ny demokrasia tandrefana i Olivier Costa, talehin'ny fikarohana ao amin'ny CNRS sy ho an'ny Siansa Politika ao Bordeaux.
Mahatsapa ny vahoaka fa maizina ny hoavy ary tsy mandaitra ny fomba fanamboarana fahinin'ireo antoko efa misy. Noho izany, maro no alaim-panahy hiantehatra amin'ireo vao tonga eo amin'ny sehatra politika izay mandroso vahaolana vaovao. Matetika ngeza loatra ireo kofehy fa amin'ny lafiny sasany, tsy misy iraharahian'ny olona an'izany. Misy ireo mino ny zavatra aroson'ireo vao tonga ireo amin'ny filazana amin'ny tenany fa mbola tsy nandramana izany, ary ireo ao anatina lojikam-panoherana, leo tanteraka mikasika ny antoko efa misy. Ary koa, io fahombiazana io dia noho ny tsy nahafahan'ny antoko mahazatra manolotra safidy.
Herinandro vitsivitsy alohan'ny fifidianana, tsy misy amin'ireo nankafizina indrindra afaka niala tamin'ny fomba maharitra. Marine Le Pen no eo amin'ny lohan'ny fitsapankevitra nefa koa sady miatrika olana ara-pitsarana , indrindra ilay iray mikendry ny fampiasana mpanampy parlementera eoroperana maro, ny famatsiambolan'ny fampielezankeviny ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ary ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012 teo ambany fanampiana ara-bola avy amin'ny Rosiana na koa ny fanesorana ny zo maha-parlemantera eoropeanina azy noho ny ”fampielezana sary mahery setra”. Novoaboasin'ny haino aman-jery sosialy rehetra ny fandrahonana ara-pitsarana mitambesatra amin'i Fillon ary koa ireo fampanantenany hiala raha toa ka iharan'ny fanadihadiana ara-pitsaràna izy:
— Salem (@Ibn_Sayyid) 1 Martsa 2017 
Aoka ho ampiharin'i Fillon ny fampanantenany voalohany :” Tsy ho kandidà aho raha toa ka miatrika fanadihadiana ara-pitsaràna”.
Dia mety hahafinaritra izany. pic.twitter.com/kSQO1XiSkX 
Mbola singa tsy fantatra ary tsy mahazo, na ny fanohanana na ny rafitry ny antoko politika mahazatra, i Emmanuel Macron. Miezaka mafy ny hanambatra ny herin'ny havia i Benoit Hamon ary mandova, na tsy fidiny ho azy aza, ny vokatry ny fepotoana fitondrana nandritry ny dimy taona tena tsy nalaza tamin'ny repoblika faha-5.
Ny fitambaran'ireo singa fototra rehetra ao aminy no mahatonga ity fifidianana ity ho iray amin'ireo tena tsy azo antoka nandritra ireo folo taona farany nisesy, ary na iza na iza no ho mpandresy, ho fanamby sarotra goavam-be horesena ny andraikitry ny mitantana firenena izay mizarazara hatrany hatrany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/21/96770/
 mampiavaka ity fifidianana ity izy: http://www.atlantico.fr/decryptage/tout-qu-faut-savoir-enseignements-masques-sondages-pour-mieux-anticiper-resultat-prochaine-presidentielle-reports-voix-2961418.html
 fiakarana ankapoben'ireo antoko mpambabo ny fon'ny vahoaka ao Eoropa: http://www.sudouest.fr/2016/06/23/l-europe-succombe-de-plus-en-plus-au-populisme-et-la-france-2409722-710.php
 olana ara-pitsarana: https://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/02136491934/02136491934-le-fn-rattrape-par-les-affaires-1153842.php
 1 Martsa 2017: https://twitter.com/Ibn_Sayyid/status/837017441351905281